4 Days South Luangwa National Park - Luxury Safari Desde Absolute Zambia Safaris
This package features one of African top wildlife prime destination South Luangwa National Park well known for leopard and the famous walking safari as it is called the home of Africans walking safari.
It gives clients an opportunity of experience a night drive that focuses more on Nocturnal animals as it allows in few destinations in African, on the other hand clients will experience and feel the real Africa by doing a walking Safari accompanied by one of the top and knowledge able guides in all areas in Africa top safari destinations.
• Park Fees and Vehicle Park Fees
Flights and Transfer Included are:
• Flight from Lusaka Airport to Mfuwe in South Luangwa National Park
• Flight from Mfuwe Airport to Lusaka
Day 1 – Transfer Flight Lusaka to Mfuwe /Transfer from Mfuwe Airport to Mfuwe Lodge
On arrival at Lusaka Airport meet and greet by our representative, assist you with luggage and show you the domestic flight help desk for your flight to mfuwe.
On arrival at Mfuwe Airport, you will have met and great by Mfuwe lodge
Guide who will now transfer you from the airport to Mfuwe lodge a 45min – 1hr drive on a tardy road through the Mfuwe settlement area and you will stop at main gate entrance to the park where Mfuwe lodge is located where you will stay for the first 3 nights of your unforgettable Zambian safari.
Brief notes about South Luangwa National Park:
Day 1 to Day 4 - Mfuwe lodge -South Luangwa National Park Lodge
-Each chalet has its own private deck the chalets are equipped with en-suite shower, twin wash basins and toilet, international power sockets, toiletries (soap, shampoo, conditioner, skin moisturizer), hair dryers, personal safe, mosquito nets, and air conditioners.
- Bush Spa - Extra Cost
Please inquire for Single Traveler /Children rate /Jan to June&Nov;-Dec